तस्बिरमा हेर्नुहोस् उपत्यकामा प्रचण्ड–माधव समूहको आमहड्ताल ! « MNTVONLINE.COM
तस्बिरमा हेर्नुहोस् उपत्यकामा प्रचण्ड–माधव समूहको आमहड्ताल !
काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) दाहाल–नेपाल समूहले आज नेपाल बन्द गरेको छ । उक्त बन्द सफल पार्नको लागि नेकपाका शीर्ष नेताहरु नै सडकमा उत्रिएका छन् । काठमाडौं उपत्यकामा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ । बिहानैदेखि सार्वजनिक सवारी साधनन चलेका छैनन् । मानिस हिँडेर नै गन्तब्यतिर लागेका देखिन्छन् ।
ठाउँ ठाउँमा प्रर्दशनकारी भेला भएर नाराबाजी गरेका छन् । बन्दले उपत्यकाको जनजिवन प्रभावित बनेको छ । प्रचण्ड–माधव समूहका कार्यकर्ता भेला भएर शान्तिपूर्ण नाराबाजी गरिरहेका छन् । प्रहरीले नाराबाजी गर्नेलाई निगरानी गरेको छ भने बन्द आह्वान गर्दै हिँड्ने कार्यकर्तालाई पक्राउ गरिरहेको छ ।
तस्बिरः हिमाल जोशी
काठमाडौँ । दुई वर्ष अगाडि नेपाल र मलेसियाबीच भएको श्रम समझदारीले प्रत्याभूत गरेको नेपाली श्रमिकको सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी विषय ढिलै भए पनि कार्यान्वयनमा आएको छ ।
सवारी दुर्घटनामा दुईको मृत्यु !
सोनु सूदले एक जना नेपालीको उपचारका लागि सहयोग गर्ने
देशभर ७८ जनामा कोरोना संक्रमण, मृत्यु हुनेको संख्या शुन्य
जनवरीमै ट्रम्प दम्पतीले कोरोनाको खोप लगाएका थिएः पूर्व सल्लाहकार
फेरि बढ्यो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य !